Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Diyaaradda Boeing 737 ayaa ka degaysa BIYO deg-deg ah Hawaii
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Jabinta Hawaii • News • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Diyaaradda Transair Boeing 737 ayaa sameysay BIYO deg deg ah Hawaii
Diyaaradda xamuulka qaada ee Transair Boeing 737 ayaa “isku dayaysa inay dib ugu laabato magaalada Honolulu markii duuliyeyaasha lagu qasbay inay diyaaradda ku dajiyaan biyaha.”
Diyaaraddu waxay ka dhigtaa deg-degga biyaha deg degga ah Honolulu.
Labo ka mid ah shaqaalaha markabka ayaa waxaa badbaadiyay ciidamada ilaalada xeebaha ee Mareykanka.
Duuliyayaashu waxay soo sheegeen cillad xagga mishiinka ah waxayna iskudayeen inay ku noqdaan Honolulu.
Diyaaradda xamuulka qaada ee Transair Boeing 737 ayaa lagu qasbay inay sameyso deg deg deg deg ah oo biyo ah iyadoo ka duushay magaalada Honolulu waxyar uun kadib markii ay duushay. Sida laga soo xigtay Ilaalada Xeebaha ee Mareykanka, labada shaqaalihii markabka waa la badbaadiyey.
Maamulka Duulista Federaalka (FAA) ayaa soo wariyay in gurmadku ka dhacay markabka Transair Duulimaad 810 subaxnimadii hore ee Jimcaha 3; 30am HST.
“Duuliyeyaashu waxay soo sheegeen cillad xagga mishiinka ah waxayna isku dayayeen inay ku laabtaan Honolulu markii lagu qasbay inay diyaaradda ku dajiyaan biyaha,” ayay tiri FAA. "Sida lagu helayo macluumaad hordhac ah, ilaalada Xeebaha ee Mareykanka ayaa badbaadiyay labada shaqaalihii markabka."
Afhayeen u hadlay ilaalada Xeebta, Sarkaalka Petty Sarkaalka Saddexaad ee Matthew West, ayaa sheegay in diyaarad Helicopter ah ay soo badbaadiyeen mid ka mid ah shaqaalaha, halka "helicopter waaxda dab damiska ay badbaadisay midka kale." Qalab ilaaliye Xeebeed ayaa sidoo kale loo diray goobta.
Diyaaradda laga hadlayo ayaa loo maleynayaa inay tahay Boeing 46-737 oo 200 jir ah, oo u diiwaan gashan N810TA. Waxaa ku shaqeeya Rhoades Aviation midabada Transair.